Xisbigga Moderat-ka oo doonaya in dib eeggis lugu sameeyo xeerka socdaalka | Somaliska
Xisbigga Moderater-na ayaa u muuqda mid walaac ka qaba qaxootiga faraha badan ee dalka Yimid, ama la soo baxay weji kale oo ka duwan kii horey loogu yaqiinay tan iyo markii xisbigga looga adkaaday doorashadii hore iyo kalsooni kala noqoshadii Anna Kindberg Batra.
Xisbbigan ayaa maalmihii tagay waxaa uu hadal hayey fikir la xirriirta in isbadal lugu sameeyo sharuucda u yaala siyaasadda magangalyo doonka iyo socdaalka.
Haweeneyda lugu magacaabo Elisabeth Svantsoon oo ah afhayeenka xisbigaasi ee dhanka siyaasadda suuqa shaqada ayaa sheegtay in xisbiggeedu doonayo in waddammada xubnaha ka ah midowga Yurub ay qeybsadaan saamiga qaxootiga waxa loo yaqaano “kvotflyktingar” ee ah soo qaashadda qaxootiga ka baxsan qaaradda Yurub. Waxaana ay sheegtay invIswiidhan iyo dalalkaba gacan u fidiyaan dadyowga ay sheegtay ineey u baahan yihiin magangalyo. Waxeey sidoo kale sheegtay in gacan qabashadaasu noqon mid deeqsi ee arrintu noqoneeyso caddaalad kolka dalalka Midoygu saami qeybsado qaxootiga.
Dhina kale iyadoo ku dheeraatay faalladda aragtida xisbigeeddu ka qabo amuurtan ayey farta ku fiiqday nidaamyada kala duwan ee dalkaan lugu iman karo, kuwaas oo ay ku sheegtay ineey yihiin xilliga dagaal ama masiibo kalifta in dadyowgu soo qaxo. Sanadkii 2015-kii ayey sheegtay in uu soo baxay nidaam aan si dhab ah u shaqeeyneyn ama u muuqda waa sida ay hadalka u dhigtaye.
“Haddii la doonayo in la gacan qabto dadka dhab ahaan u baahan magangalyadda ee aannu aheyn kuwa dhaqaale doonka ah, waa in midowga Yurub qaataa nidaamka saami qeeybsiga qaxootiga” ayey tiri Elisabeth Svantsson.
Dhinaca kale wasiiradda socdaalka dalkaan Iswiidhan Heléne Fritzon, ayaa difaacday in la daciifiyo xaquuqda socdaalka, waxaana ay sheegtay in aaneey dooneyn in dib u wada xaajood lugu sameeyo cahdi qaramameedkii Jineefa.
“Cahdigii Jineefa waxaa saxiixay 145 dal, waana mid meel mariya xuquuqda aadanah iyo xiriirka u dhaxeeya dalalka, waxay ila tahay inuu saameeyn weyn yeelan doono haddii bur burintiisa ayIswiidhan hor boodo” ayey tiri wasiiradda oo hadalkeedkii ku dartay in aan si dhab ah looga fekarin dood noocaas ah.
Bisha oktoobar ee inugu soo fool leh ayaa la filayaa inuu qabsoomo shirweynaha ay xisbigga Moderat-ka ku dooranayo inuu yeesho hogaamiyaha hogaamin doona, islamarkaasina looga xaajoon doona qorsha socdaalka.
” waxaan runsanahay in doodani ay iman doonto Yurub iyo dalalka kale ee caalmka, waxaa arrintan ka hadalay madaxweynaha Faransiiska, tani macnaheedu waxaa weye in loo baahan yahay in Iswiidhan ay iyadu doodan hagto ama ay qabato lagana munaaqishooda halka ay ku biyo shuban doonto inkasto ay waqti hore tahay, lana saaro xoog doonista nidaamka saamiga qaxootiga” ayey tiri Elisabeth Svantsson oo misna sheegtay in aanay wel wel ka qabin qabin doodda ka dhalan doonta in mustaqbalka wax laga bedelo cahadigii Jineefa. ugu dambeyntiina waxaa ay sheegtay in Miowga Yurub uu qeybsado saamiga qaxootiga ay markaasi imaan lahaayeen dadyowga sida dhabta ah ugu baahan gacan qabashadda, balse taasi macnaheedu aaanu aheyn in qaxootiga uu ka yaraan lahaaa tirro ahaan.